Unoyeuka Here?—December 2018
Nharireyomurindi—Yekudzidza | December 2018
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kekchi Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Uchapupu hupi huri muBhaibheri hunoratidza kuti Mwari anotinzwira tsitsi?
VaIsraeri pavaiva varanda muIjipiti, Mwari aiona kutambura kwavaiita uye airwadziwawo. (Eks. 3:7; Isa. 63:9) Takasikwa nemufananidzo waMwari uye tinokwanisa kunzwira vamwe tsitsi. Anotinzwira tsitsi kunyange patinonzwa sekuti hatina kukodzera kudiwa naye.—wp18.3, peji 8-9.
Zvakadzidziswa naJesu zvakabatsira sei vanhu kuti vakunde rusarura?
Panguva yaJesu vaJudha vakawanda vaiva nerusarura. Kristu akati tinofanira kuzvininipisa uye akashora nyaya yekudada nerudzi. Akakurudzira vateveri vake kuti vaonane sehama.—w18.06, peji 9-10.
Chii chatinodzidza pakusabvumira kwakaita Mwari kuti Mosesi apinde muNyika Yakapikirwa?
Mosesi aiva neushamwari hwakasimba naJehovha. (Dheut. 34:10) Makore 40 ekugara murenje paakanga ava kupera, vanhu vakanyunyuta kechipiri nekuda kwekushaikwa kwemvura. Mwari akaudza Mosesi kuti ataure nedombo. Pane kuti adaro, Mosesi akarova dombo racho. Jehovha anogona kunge akatsamwa nekuti Mosesi haana kuteerera mirayiro yake kana kuti haana kuita kuti Mwari akudzwe nechishamiso chacho. (Num. 20:6-12) Izvi zvinofanira kutidzidzisa kuti kuteerera Jehovha uye kumukudza kunokosha.—w18.07, peji 13-14.
Nei zvingava nyore kuti tikanganise kana tikatonga nezvinooneka nechekunze?
Pane zvinhu zvitatu zvinoita kuti vanhu vatonge vamwe nekutarisa zvinoonekwa nechekunze zvinoti: rudzi, upfumi uye zera. Zvinokosha kuti titevedzere Mwari asingasaruri. (Mab. 10:34, 35)—w18.08, peji 8-12.
VaKristu vakura vangabatsira sei vamwe?
MuKristu akura asisaiti basa raaimboita, anoramba achikosheswa naMwari uye ane zvakawanda zvaanogona kuita kuti abatsire vamwe. Anogona kubatsira varume vasingatendi vehanzvadzi dzemuungano, kubatsira vasisaiti basa, kuitisa zvidzidzo zveBhaibheri uye kuwedzera ushumiri hwake.—w18.09, peji 8-11.
MuBhokisi reMaturusi Ekudzidzisa revaKristu munei?
Mune makadhi eJW.ORG uye mapepa ekukoka vanhu kumisangano. Munewo maturakiti 8 ari nyore kushandisa uye magazini eNharireyomurindi neMukai! Bhokisi iri rinewo mabhurocha mashoma, mabhuku maviri anoshandiswa pakudzidzisa Bhaibheri uye mavhidhiyo 4, kusanganisira vhidhiyo inonzi Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?—w18.10, peji 16.
MuKristu ‘angatenga chokwadi’ sei sezvinokurudzirwa pana Zvirevo 23:23?
Hatitengi chokwadi nemari. Asi tinofanira kushandisa nguva nesimba redu kuti tichiwane.—w18.11, peji 4.
Chii chatinodzidza kubva pamabatiro akaita Hosiya mudzimai wake Gomeri?
Gomeri akaita upombwe kanoverengeka, asi Hosiya akamuregerera uye vakaramba vari murume nemudzimai. Kana mudzimai kana murume wemuKristu akaita upombwe, muKristu wacho anogona kumuregerera. Kana akatangazve kurara naye, chikonzero chemuMagwaro chekuti amurambe chinenge chisisashandi.—w18.12, peji 13.
Kudza “Zvasungwa Pamwe Chete Pajoko naMwari”
‘Jehovha Akatiratidza Mutsa’
Vechidiki, Musiki Wenyu Anoda kuti Mufare
Vechidiki, Munogona Kuva Neupenyu Hunogutsa
“Munhu Akarurama Achafara Muna Jehovha”
Indekisi Yenyaya dzeNharireyomurindi neMukai! dza2018
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA December 2018
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA December 2018
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA December 2018